के तपाईको कामले तपाईलाई काम गरिरहेको छ? कति कर्मचारी छन्? | Martech Zone
के तपाईको कामले तपाईलाई काम गरिरहेको छ? कति कर्मचारी छन्?
बिहीबार, सेप्टेम्बर 6, 2007 सोमबार, मार्च 18, 2013 Douglas Karr
केहि महिना अगाडि तपाईले मलाई मेरो डेस्कमा AM बिहान वा पछि पक्रेनन्। यो त्यस्तो होइन कि मैले ढिलो गरें ... यो केवल मेरो कामले मलाई काम गरिरहेको भन्दा बढी काम गरिरहेको थियो। सम्भवतः यो मध्य-पश्चिममा कुनै व्यक्तिले पाउन सक्ने सब भन्दा राम्रो काम थियो। सफ्टवेयर उद्योगमा, म मान्छेलाई राम्रो पाउनको लागि चुनौती दिन्छु। म एक उत्पादन व्यवस्थापक थिएँ - सब भन्दा द्रुत बृद्धि गर्ने कम्पनीहरु मध्ये एक - क्षेत्र मा मात्र होइन तर देशमा। यद्यपि द्रुत वृद्धिले यससँग धेरै चुनौतीहरू ल्याउँछ।
म एक उत्पादन पृष्ठभूमिबाट आएको हुँ, आधुनिक कामको मेरो धेरै प्रभाव अझै पनि मेरो इन्जिनियरि core कोरमा फर्कन्छ। एक उत्पादन डिजाइन, निर्माण, बेचेको र समर्थित छ। यो एकदम सरल छ ... जब सम्म तपाईं द्रुत दरमा बढ्न थाल्नुहुन्न। नयाँ असेंबली लाइन सुरू गर्नुको सट्टा तपाई यसमा व्यक्तिहरू राख्नुहुन्छ। स्लिग कुकुरले स्लाइह तान्दै कल्पना गर्नुहोस्। केही थप कुकुरहरू र केही थप सवारहरू थप्नुहोस् र अब तपाईंलाई उत्कृष्ट मेशर र कुकुर नेताको आवश्यकता छ। यद्यपि धेरै थप्नुहोस्, र कुकुरहरू कुन दिशातिर सर्ने भनेर जान्दैनन् र मेशेर मिक्सको कतै हराएको छ।
विडम्बना, अवश्य पनि, यो हो कि व्यापक वृद्धि व्यापार सफलताको मुख्य विशेषताहरू मध्ये एक हो। म ठुलो व्यवसाय मा ठोक्दिन - म केवल ढकढकाइदै छु काम एक ठूलो व्यवसाय मा। मेरो अन्तिम संक्रमणको साथ, म २०० भन्दा बढीको कम्पनीबाट of को कम्पनीमा सर्दै छु।
मेरो नयाँ काममा, त्यहाँ मान्छे भन्दा दुईदेखि तीन गुणा काम हुन सक्छ। फरक यो हो कि कोही अर्को व्यक्तिलाई पर्खिरहेका छैनन्, यद्यपि ... हामी सबै छिटो छिटो छिटो हामी काम बाहिर ढकढकाउन सक्दछौं। कोही पनि दुखित छैन, कसैले पनि चिच्याइरहेको छैन ... हामी सबै एक अर्कालाई मद्दत गरिरहेका छौं उत्पादन र हाम्रा ग्राहकहरुलाई अगाडि सार्न। हाम्रा केही ग्राहकहरू अविश्वसनीय रूपमा ठूला छन्, तर तिनीहरू अत्यन्त क्षमाशील छन् जबसम्म हामी तिनीहरूसँग सञ्चार कायम राख्दछौं र तिनीहरूलाई हाम्रो प्रगति बताउँदछन्।
अन्तिम सप्ताह मैले एक पीबीएक्स फोन प्रणाली स्थापना गरें, एक नेटवर्क, एक वायरलेस नेटवर्क, हाम्रो पहिलो न्यूजलेटर डिजाइन, हाम्रो पहिलो अभियान पठाइयो, विकासकर्ताहरूको दुई टोलीहरूको लागि हाम्रो प्रणालीमा धेरै सुधारहरूको लागि आवश्यकताहरू लेखें, हामीलाई एओएल पोस्टमास्टरहरूसँग अनब्लक हुनको लागि काम गर्यो, सारियो हाम्रो पुरानोबाट नयाँ स्थानहरूमा अफिसले केहि नयाँ ग्राहकहरू लागू गर्न मद्दत पुर्‍यायो, र सबै जसो व्यवहार गरियो फोन कम्पनी समस्याहरू।
त्यो ठूलो कम्पनीमा मैले गत वर्ष हासिल गरेको भन्दा बढी हुन सक्छ! मेरो पोइन्टले मैले काम गरेको कम्पनीलाई ढकढाउने होइन - म अझै पनि ग्राहक हुँ र उनीहरूलाई उद्योगमा सर्वश्रेष्ठको रूपमा सिफारिस गर्दछु, कुनै पनि होइन। मेरो कुरा केवल यस तथ्यलाई ध्यान दिनको लागि हो कि सानो, स्वायत्त टीमहरू बिजुलीको वेगमा सार्न सक्दछन्। यदि तपाईं प्रगति हेर्न चाहानुहुन्छ भने, अफसरशाही हटाउनुहोस् र तपाईंको कर्मचारीहरूलाई सफल बनाउनको लागि सक्षम पार्नुहोस्।
एउटा उदाहरण मैले धेरै वर्ष अघि पढेको थिएँ WL Gore, आविष्कार गर्ने कम्पनी गोर-टेक्स्ट.
गोर फोर्टुन पत्रिकाले "अमेरिकामा काम गर्नका लागि १०० सबै भन्दा राम्रो कम्पनीहरु" मध्येको नाम लिएको छ, र हाम्रो संस्कृति रचनात्मकता प्रदर्शन गरेर र टीमको कार्यलाई बढावा दिदै विकासको खोजी गरिरहेका समकालीन संस्थाहरूको लागि नमूना हो।
गोरका नेताहरूले कम संख्यामा कामदारहरूको सृजनात्मकतालाई न्यून गरी समग्र उत्पादकत्व घटाउने स्थानको बढ्दो भेट्टाए। कम्पनी बृद्धि गर्नुको सट्टा, गोरले केवल 'नयाँ' कम्पनी सुरू गर्दछ, उत्पाद लाइनहरू र प्रत्येक स्थानको संगठनात्मक संरचनालाई दर्पण गर्दै। अब तिनीहरू 8,000 45 वटा स्थानमा ,177००० भन्दा बढी कर्मचारीहरू छन्। यदि तपाई गणित गर्नुहुन्छ भने, कि प्रति स्थान को बारे मा XNUMX कर्मचारीहरु - एक धेरै व्यवस्थित कर्मचारी गणना।
सफ्टवेयर आज आफूलाई यो संरचना गर्न उधारो दिन्छ। त्यहाँ गहिरो-लुकाइएको बगहरू र सतहहरू र जटिलताको तहहरूको साथ विशाल अनुप्रयोगको विकास गर्न विशाल विकास टोली आफैमा ट्रिपिंग गर्न आवश्यक छैन। सट्टा, SOA साना, स्वायत्त टोलीलाई बढावा दिन्छ। प्रत्येक टोलीले जटिल समाधानहरू निर्माण गर्न सक्दछ ... केवल समानता भनेको अनुप्रयोगको अंशहरू कसरी एक अर्कासँग बोल्छन्।
हाम्रो सानो मा जीवन राम्रो छ कम्पनी। हामी अहिले लगानी कोष लिइरहेका छौं (स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्) मलाई सम्पर्क गर्नुस् यदि तपाईं गम्भीर लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने) र उद्योग फराकिलो छ। केहि असहमत हुन सक्छ, तर म विश्वास गर्दिन कि हामीसँग एकल, सक्षम प्रतिस्पर्धी छ। हामी पigned्क्तिबद्ध र उद्योग मा सबै भन्दा राम्रो समाधान संग एकीकृत छौं ... ईमेल, एसएमएस, Voicehot, फ्याक्स, वेब र लाभ POS टेक्नोलोजी रेस्टुरेन्ट उद्योगको लागि अधिकतम स engage्लग्नता र नाफा।
भाग्यवस, हामी दुबै, माध्य, र गतिको एक आश्चर्यजनक दरमा बढिरहेका छौं। हामीले रेस्टुरेन्ट, वेब, खोज र मार्केटि industries उद्योगहरूमा सब भन्दा सम्मानित कम्पनीहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गरेका छौं। उद्योग लिनको लागि हाम्रो हो र हामीसँग यो कार्य सम्पन्न गर्नका लागि एउटा रणनीति र नेतृत्व छ। र हामी चाँडै कुनै पनि हालतमा भाँडामा लिने योजना बनाइरहेका छैनौं।
आज, म मेरो काम गर्दै छु - यसले मलाई काम गर्न दिदैन। म अफिसमा AM बजे छु र म एक हप्ता पहिले गरेको भन्दा प्रति हप्ता १० देखि २० घण्टा राम्रो काम गर्छु। किनभने मैले कामको घाता .्क मात्रा पाइरहेको छु, म खुसी छु र उत्पादक। म आशा गर्दछु कि हामी कुनै पनि समय १ 177 employees कर्मचारीमा छिट्टै प्राप्त गर्दैनौं ... जब सम्म हामी नयाँ स्थान रोल आउट गर्ने निर्णय गर्दैनौं!
टैग: रोजगार पदानुक्रमसंगठनसंगठनात्मक संरचनासंरचना
सफ्टवेयर उद्योगको रहस्य
सेप्टेम्बर 10, 2007 मा 9: 52 AM
उत्कृष्ट लेख। म यसको बारे प्राय: सोच्दछु किनकि म ठूलो कम्पनीमा काम गर्दछु, तर मेरो खाली समयमा एउटा सानो वेब स्टार्टअप र केही ब्लग चलाउँछु। डाटा गवर्नेन्स म एक दैनिक आधारमा के गर्छु, तर म स्टार्टअपहरू मन पराउँछु किनकि तपाईं व्यापारको हरेक अंशको स्वाद पाउनुहुन्छ।
सेप्टेम्बर 10, 2007 मा 9: 53 AM
मैले भर्खर मैले महसुस गरें कि मैले आफ्नो यूआरएल बुचारेँ ...।